Ciidamada SAMA oo caawa fashiliyay miino lagu aasay qeybo ka mid ah Degmada Heliwaa ”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ciidamada SAMA oo caawa fashiliyay miino lagu aasay qeybo ka mid ah Degmada Heliwaa ”SAWIRRO”
Howlgallo lagu xaqiinayo amniga caasimadda ayaa ciidamada SAMA oo kaashanaya Maamulka Degmada Heliwaa waxa ay caawa ka sameeyeen nawaaxiga isgooska Ex-koontarool Balcad ee Degmada Heliwaa.
Ciidamada amniga ayaa intii ay wadeen howlgalka waxa ay ku guuleysteen in ay soo saaraan miino nuuca meelaha fog laga hago oo ay dhagar qabayaasha Al-shabaab ay ku aaseyn hareerha waddada, kaasi oo ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle oo warbaahinta kula hadlay goobta ay ciidamada SAMA ku fashiiyeen miino lagu aasay waddada hareeraheeda ayaa tilmaamay inay tahay guul u soo hooyatay shacabka iyo ciidankuba, kuna booriyay shacabka inay sii labo jiraabaan wada shaqeynta kala dhexeysa ciidamada amniga.
“Waxaan caawa kormeer shaqo oo aan ugu kuurgaleyno xaaladda Amni ku tagnay xaafado ka mid ah Degmada Heliwaa oo ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinaayo Amniga Degmada, waxaana intii aan howlaha kormeerka ah ku jirnay la kulanay ciidama SAMA ee howlgalada kawada Isgoyska Ex-Koontarool ee Degmada Heliwaa oo fashiliyay qarax miino ah oo lagu aasay jid dhexdiisa, kaas oo kooxaha Nabad diidka ah ay doonayeen in ay ku waxyeeleeyaan Shacabka sooman ee aan waxba galabsan”.ayuu yiri Guddoomiye Cabdixakiin.
Gudoomiyaha Degmada Heliwaa ee Gobolka Banaadir Mudane Cabdixakiin Cumar ayaa uga mahadceliyay shacabka ku nool degmada Heliwaa sida ay ula shaqeeyeen ciidamada SAMA oo caawa fashiliyay hagardaamada ay maleegayeen Al-Shabaab.
Taliyeyaasha Ciidamada Asluubta iyo Booliska oo kormeeray Ciidan tababar uu uga socdo dugsiga Gen. Kaahiye “Sawirro”
Tartamayaasha Degmada Jowhar oo soo tiigsaday wareegga labaad ee tartanka “SAWIRRO”